Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » IJamaica iihotele kunye nomzi mveliso weeresityu ukhula ngama-330.7%
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Caribbean • Culinary • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
IJamaica iihotele kunye neeresityu ziyanda
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, uwamkele amanani abhengezwe liZiko lokuCwangciswa kweJamaica (PIOJ) izolo, elalikhokelela ekukhuleni okukhulu kumzi mveliso weehotele neevenkile. I-PIOJ ibhengeze ukuba uqoqosho lukhule nge-12.9% kwikota ka-Epreli ukuya kuJuni ka-2021 xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Amashishini okhenketho kunye nomoya wokubuk 'iindwendwe abe negalelo elikhulu koku, ngamanqanaba okukhula okurekhodiweyo kutyalo-mali kwiihotele nakufike kumazwe ngamazwe.
Icandelo leehotele neevenkile zokutyela lirekhode elona nqanaba liphezulu lokukhula kwicandelo lokwenza iinkonzo nge-330.7%.
Ishishini leenkonzo lenyuke nge-14% kwikota ka-Epreli ukuya kuJuni ngenxa yokonyuka okubonakalayo kokufika kweendwendwe.
Ngo-Epreli-ngoMeyi 2021, ukumiswa kwabantu abangaphezulu kwama-205,224.
Ngokwedatha ekhutshwe yi-PIOJ, icandelo leehotele kunye neeresityu, lirekhode elona nqanaba liphezulu lokukhula kwicandelo lezemisebenzi, lonyuke nge-330.7%. Ngokubanzi, ishishini leenkonzo lenyuke nge-14% ngaphezulu kwekota ka-Epreli ukuya kuJuni ngenxa yokonyuka okubonakalayo kokufika kweendwendwe xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, xa imida ivaliwe.
Amanani abonisa ukuba ngo-Epreli-ngoMeyi 2021 abamileyo abafike kwi-205,224 abatyeleli xa kuthelekiswa nelo xesha linye lika-2020.
Umphathiswa u-Bartlett, onwabile yingxelo leyo, wathi “ushishino lokubuk 'iindwendwe luphakathi kwezona ndawo zithintekileyo ekuqalekeni kwesi sifo. Ngapha koko, ifike esiphelweni echaphazele uqoqosho lwethu. Ndiyazingca ke ngenkqubela esele siyenzile ukubuyisa, kunye nefuthe elihle ebesinalo kuqoqosho lwethu, kwaye ngokwandisa abantu baseJamaica. ”
“Ukonyuka kwama-330.7% kwicandelo leehotele asiyonto incinci kwaye sisiphumo somsebenzi onzima owenziwe nguMphathiswa Wezokhenketho kunye nabathathi-nxaxheba bethu ukudala imeko-bume ekhuselekileyo kubasebenzi bethu abakwimizi-mveliso kwanabatyeleli bethu. Ibhola esilwenzileyo kwiiPaseji zoKhuseleko lwezoKhenketho, nelifumene ukuqondwa kwihlabathi liphela ngokusebenza kakuhle kunye nokuyila izinto ezintsha nako kufanelekile ukuba kudunyiswe. Icandelo lezokhenketho laseJamaica iyaqhubeka nokukhula njengeshishini elinengeniso nje kuphela kodwa elikhuselekileyo, elingenamthungo nelikhuselekileyo, ”wongeze watsho.
UMphathiswa ukwenze iiprojekthi zokukhula okuqhubekayo kwikota elandelayo, njengale yakutshanje Ukuvulwa kwakhona kweshishini lokuhamba ngenqanawa Kulindeleke ukuba ibe nempembelelo enkulu kuqoqosho.
“Senza imitsi emihle ngokubeka isiseko sokubuyiselwa ngokupheleleyo kwecandelo lezokhenketho laseJamaica, ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo. Ayizukuba yindlela elula njengoko sihamba kwikamva elingenakulinganiswa kodwa, ekuhambeni kwexesha, siza kuba necandelo lezokhenketho elikhuselekileyo, eliquka konke nelomeleleyo kubasebenzi bethu, iindwendwe kunye namaqabane ethu kwezokuhamba, ”utshilo uBartlett.
IZiko lokuCwangciswa kweJamaica (PIOJ) yiarhente yoMphathiswa Wezemali kunye neNkonzo Yoluntu (MOFPS). Yeyona arhente iphambili yocwangciso efuna ukuqala nokulungelelanisa uphuhliso lwemigaqo-nkqubo, izicwangciso kunye neenkqubo zophuhliso oluzinzileyo lweJamaica. Yasekwa ngokukodwa ukomeleza amandla ocwangciso lukaRhulumente.